Ny Sihanaka dia isan'ny foko iray lehibe mandrafitra ny vahoaka malagasy, monina manodidina ny farihin'Alaotra, voafaritry ny renirano Bemarivo ambony sy Tampoketsa atsimo ao avaratra, ny renirano Mahajamba ambony ao andrefana, ary ireo havoana misy ny Bezanozano sy ny ala ao atsinanana. Ny tanàna lehibe any dia Ambatondrazaka.
Araka ny lovan-tsofina sy tantara napetrak'ireo olon-kendry sy mpanazary ary koa ny tantara iraisam-pirenena dia "Malay karazana" no razamben'ny Sihanaka. Izany hoe iray tarika sy fiandohana amin'ny vahoaka any Filipina, Malaizia, Marianas, Malukus, sns... Izy ireo dia samy nipoitra avy tamin'ny vahoaka mpifindra-monina mampiasa ny fiteny aostrônezianina. Ny Malay () dia karazan'olona fahadimy ka zarazara hoditra ny fihodirany. Izany hoe eo anelanelan'ny fotsy sy mainty, araka ny fikarohana nataon'ilay manam-pahaizana Alemana Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) tamin'ny taona 1795. Hita taratra tokoa izany fihodirana zarazara izany eo amin'ny Sihanaka. Ny teny hoe "Malay" dia mifandray amin'ilay teny Sihanaka hoe "milay" izay midika hoe tsara. Tsara tarehy sy bikana tokoa ny tovovavy sihanaka arak'izany. Marihina fa tsy tafiditra ao anaty raki-bolana malagasy io teny sihanaka iray io nefa ampiasain'ny tanora malagasy ankehitriny ka azon'ny besinimaro ny heviny.
2 Tsiahy sy marika
Tsiahy sy marikaHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sihanaka&oldid=997950"
Dernière modification le 10 Oktobra 2020, à 19:40
Voaova farany tamin'ny 10 Oktobra 2020 amin'ny 19:40 ity pejy ity.